Indlu ye-Little Blue Beach, Indlwana Yamaphupho! - I-Airbnb
Indlu ye-Little Blue Beach, Indlwana Yamaphupho!
Pembroke, Ontario, i-Canada
Indlu ye-Little Blue Beach iwumndeni okahle kakhulu noma abantu abashadile abavakashayo. Ilungiswe ngokuphelele ngesitayela nekhwalithi ngenkathi igcina ubuhle bendlwana yendabuko. Itholakala ebhishi enesihlabathi esimhlophe, ungahamba ngamakhulu ezinyawo phansi esihlabathini esinzulu. Ilungele imindeni nemibhangqwana efuna iholide lokuphumula. Izikebhe, izikebhe zokudoba, amathoyizi amanzi, i-55 " Smart TV, imidlalo, izincwadi, i-wifi, amamethi e-yoga, amajazi okuphila (umuntu omdala kuphela x3), i-BBQ, umgodi womlilo, izinduku zokudoba, ama-sunsets amangalisayo nokuningi!
Indlu ye-Little Blue Beach iyindawo elungiswe ngokuphelele enamasevisi esimanje, isitayela esithrendayo futhi okubaluleke nakakhulu, ubuhle bendlwana. Khuphula ibhishi elinesihlabathi esimhlophe, ukubukwa kwamanzi akho akupheli futhi kuhlaba umxhwele. Izinyathelo ezimbalwa ukusuka endlwaneni futhi ungajabulela ibhishi lethu elihle noma uhambe uye emanzini kude kunalokho ongakucabanga. Ukudoba, ukuqwala intaba, ukuhamba ngesikebhe, ukugwedla emanzini, ukugwedla ngesikebhe, imililo, ubusuku bomdlalo noma ukuhlala kalula konke kuyatholakala khona lapha. Imizuzu edlule yizitolo ezinkulu zokudla, indawo yokudlela enhle kakhulu kanye nezitolo kanye nokokuzithokozisa okuyingqayizivele ongeke ufune ukukuphuthelwa! Kusukela ekugibeleni amanzi amhlophe kuya kumakhonsathi emhumeni, kuningi ongakwenza lapha ongeke ufune ukuhamba! Ngiye ngazama ukukwenzela okokuzithokozisa okuhamba phambili ngokukunikeza konke ongakudinga, vele ulethe ukudla kwakho nezingubo. Woza ubone ukuthi i-Little Blue Beach House ihlinzeka ngani, sithemba ukuthi uzozijabulisa kakhulu esitolo!
Siyibiza ngokuthi yi-Little Blue Beach House ngoba yilokho kanye eyikho! Senze yonke imizamo yokukunikeza isitoreji sezingubo nezinye izinto, kodwa uma ufana nami futhi uhamba nge-sutcase enkulu egcwele izinto "uma kwenzeka" (ngiyiphakethe elanele) ngizigcine ekupheleni kwe-loft eduze nemibhede elala umuntu oyedwa ukuze ingabi yindlela yakho phakathi nokuhlala kwakho, uma usuyikhiphe.
Lena indawo enhle yomndeni ebhishi elikhulu elinesihlabathi esimhlophe elinehlathi elingemuva kwethu kanye nezindlwana ezimbalwa eziqashisayo. Sitholakala eduze nePaki Lesifundazwe, imizuzu engu-15 kusuka ezitolo ezinkulu zokudla, i-Walmart, i-Home Depot & More. Sebenzisa ngokunenzuzo indawo yethu futhi uhlole i-Algonquin Parks i-waterlide yemvelo, ukuhlenga emanzini amhlophe, ukuhlola imihume, i-zip lining noma ukugibela amadwala noma ukuvakashela amapulazi endawo e-berry. Akukho ukunqaba kokwenziwayo lapha, futhi sisondelene nokudla okumnandi ngobusuku ongafuni ukupheka!
Sizotholakala ngemiyalezo ye-Airbnb esithumela umbhalo oqondile. Sisekude ngemizuzu nje ukuba sikusize kukho konke ukuhlala kwakho!
Hlola ezinye izinketho ezise- Pembroke namaphethelo